mairie-antananarivo – AMBODIVONA : Fanamboarana làlana
AMBODIVONA : Fanamboarana làlana
Notohizana androany ny fanamboarana ny lalana manakaiky ny tobi-tsolika TOTAL teny Ambodivona mihazo ny CSBII Andravoahangy. Tsipaipaika avy amin’ny mponina sy mpivarotra ary tsara sitrapo teny an-toerana no nahavitàna izao foto-drafitr’asa izao. Làlana izay mirefy 120m ny lavany ary 4m ny sakany. Na ny fitaovana ampiasaina amin’izany na ny karaman’ny mpiasa dia izy ireo avokoa no miantoka izany.
Marihana fa tamin’ny volana Martsa teo no efa natomboka izao fanamboarana izao ka lalana mirefy 140m no efa vita « pavet » tamin’izany. Raha hatambatra izany dia 300m eo ho eo ny lalana hamboarina eny an-toerana. Ny antony tena nirosoana tamin’izao fanamboarana izao dia noho izy be mpifamezivezy sy hitoeran’ny fotaka sy loto ary tena tsy azo aleha mihitsy raha tsy manainga zipo sy pataloha rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Araka ny vinavina dia maharitra herinandro eo ho eony fanamboarana.
Tombony lehibe ho an’ny mponina eny an-toerana ny fahavitan’ity lalana ity ary atsy ho atsy no kasaina hotanterahina amin’ny fomba ofisialy ny fanokanana izany ka iantsoana ireo manam-boninahitra isan-tokony avy ao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.